DG ပြပွဲတွင် အဆင့်မြင့် ဇိမ်ခံ LED မီးအိမ် လက်ဝတ်ရတနာ ခင်းကျင်းပြသထားသော ကက်ဘိနက် ထုတ်လုပ်သူ တိုက်ရိုက် ရောင်းချသည်။
23 နှစ်များ ဇိမ်ခံ ဖန်သားပြင် Showcase R&D ထုတ်လုပ်သူ
DG Showcase သည် အရည်အသွေးမြင့် လက်ဝတ်ရတနာများ ပြသသည့် ဗီဒို၊ ရေမွှေး အရောင်းပြခန်း၊ နာရီ ပြကွက်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပါ။
DG သည် ဇိမ်ခံလက်ဝတ်ရတနာဆိုင်၏ စိတ်ကြိုက်လက်ဝတ်ရတနာများခင်းကျင်းပြသထားသော ဗီဒိုကို ပြသထားသည်။
DG သည် စိတ်ကြိုက်ဇိမ်ခံဖန်ခွက် လက်ဝတ်ရတနာများ ခင်းကျင်းပြသထားသော လက်ပတ်နာရီ ရေမွှေးခင်းကျင်းမှု ဗီရို လက်ကား
DG သည် စိတ်ကြိုက် ဇိမ်ခံ ဖန်လက်ဝတ်ရတနာ ကက်ဘိနက် ရေမွှေး ခင်းကျင်းပြသထားသော ထုတ်လုပ်သူ
DG ပြပွဲတွင် အဆင့်မြင့် ဇိမ်ခံ LED မီးအိမ် လက်ဝတ်ရတနာ ခင်းကျင်းပြသထားသော ကက်ဘိနက် ထုတ်လုပ်သူ တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း။
1. သင်လိုချင်တာအတိအကျမဟုတ်ဘူးလား? အမြန်ဝယ်ယူရန် တောင်းဆိုချက်ကို ပို့စ်တင်ပါ။
2. ပရီမီယံပစ္စည်းများဖြင့် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး။
3. စက်ရုံတိုက်ရိုက်စျေးနှုန်း၊ 65% အထိ သက်သာသည်။
4. Professional Designers 12 ယောက်။
5. One Stop ဖြေရှင်းချက်။
6. ယုံကြည်ရသော BV, SGS, Rosh, ISO9001 လက်မှတ်များ။
DG အရှင်ဘုရား ကေ့စ်ကိုပြသပါ။
မုန့်ဖုတ်၊ သစ်သားပြား၊ သံမဏိ၊ ဖန်၊ သားရေနှင့် acrylic စသည်တို့ပါရှိသော MDF
အဆင့်မြင့် ဇိမ်ခံလက်ဝတ်ရတနာများ ခင်းကျင်းပြသထားသည်။
စျေးဝယ်စင်တာ၊ လက်လီဆိုင်၊ အရောင်းပြခန်း၊ အခွန်လွတ်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ ကလပ်အိမ်၊ စသည်တို့
12 ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒီဇိုင်းအဖွဲ့ (အာကာသ ဒီဇိုင်နာ၊ R&D ဒီဇိုင်နာ- အလင်းရောင် ဒီဇိုင်နာ- ပျော့ပျောင်း လျောက်ပတ်သော ဒီဇိုင်နာ နှင့် ပြခန်း ဒီဇိုင်နာ)
ရေကြောင်း ၊ လေကြောင်း ၊ မီးရထား စသည်တို့ ၊
1. အခမဲ့ဒီဇိုင်း; 2.Value-added services(အခမဲ့ဖြေရှင်းချက်ပေးဆောင်မှုသဘောတရား)၊ 3.Installation ညွှန်ကြားချက်; 4. တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ပါ။ 5.Professional ပြီးနောက်-ရောင်းဝန်ဆောင်မှု။
TT၊ ကုန်သွယ်မှုအာမခံ၊ စသည်တို့။
ထူထဲသော နိုင်ငံတကာ ကင်းစင်ရေး စံထား တင်ပို့သည့် ပက်ကေ့ဂျ်-EPE ချည်ထည်-ပူဖောင်းအထုပ်- ထောင့်အကာအကွယ်- လက်မှုစက္ကူ-သစ်သားသေတ္တာ
မော်ဒယ်လ်ဒီဇိုင်း ပေါင်းစပ်မှု၏ အဆင့်မြင့်နည်းပညာကို လက်ခံကျင့်သုံးသည်။ ဖန်သားအကွေးနှင့် စတီးလ်စတီးလ်၊ ဖန်သားပြင်ကို ပိုမိုပြသနိုင်သော နေရာဖန်တီးပါ၊ သိုလှောင်ခန်းနှင့် ကိုက်ညီသော သိုလှောင်မှုနေရာကို တိုးမြင့်စေသည်၊ ထိုအချိန်တွင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်စက်ပြင်နှင့် သုံးစွဲသူတို့၏ အလေ့အထနှင့်အညီ သိုလှောင်မှုနေရာကို တိုးစေသည်။
လက်ဝတ်ရတနာ အရောင်းပြခန်း၏ ဒီဇိုင်းသည် စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ချိုးဖျက်၍ သင့်ထုတ်ကုန်များကို ခွင့်ပြုပါ။ ဖောက်သည်၏အာရုံကိုပိုမိုဆွဲဆောင်ရန် ထူးခြားသောအားသာချက်များ။
သံမဏိ ချောမွေ့စွာ ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၊ မျက်နှာပြင်လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြန်းခြင်း၊ တူညီသောအရောင်၊ လက်ဗွေမဟုတ်သော၊ အသွေးအသားကောင်းမွန်သော၊ သင့်ထုတ်ကုန်၏ပြသမှုနှင့်ကိုက်ညီသော မျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြုခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် သင့်အတွက် ဒီဇိုင်းနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည် ဆန်းသစ်သောပုံစံ၊ ခိုင်ခံ့သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ အခမဲ့တပ်ဆင်မှု၊ အဆင်ပြေစွာ ဖြုတ်တပ်နိုင်ပြီး သွားလာရေးအဆင်ပြေသည်။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ထုတ်လုပ်သူပါ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ထုတ်လုပ်ရေးပြခန်းမှာ ၂၃ နှစ်ကျော် တိုင်ကြားထားပါတယ်။ ပြီးတော့ R ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။&ဒါလည်း အဖွဲ.
Q2: ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်မလား။
A: ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်နာအဖွဲ့သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး သင်၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇိုင်နာအဖွဲ့တွင် အာကာသဒီဇိုင်နာ၊ R အပါအဝင် ဝန်ထမ်း ၁၂ ဦးရှိသည်။&D ဒီဇိုင်နာ၊ အလင်းရောင် ဒီဇိုင်နာ၊ ပျော့ပျောင်း လိုက်ဖက်တဲ့ ဒီဇိုင်နာ နဲ့ ဖန်သားပြင် ဒီဇိုင်နာ။
A- အခမဲ့ဒီဇိုင်း၊ တန်ဖိုးထပ်ထည့်သည့်ဝန်ဆောင်မှု (အခမဲ့ဖြေရှင်းချက်အယူအဆ)၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တပ်ဆင်မှုလမ်းညွှန်မှု၊ တိုင်းတာမှုခံယူခြင်းနှင့် ကြယ်ငါးပွင့်ဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက်။
Q4: မင်းရဲ့ MOQ ကဘာလဲ။
A: 1 စတုရန်းမီတာ။
Q5: ပရောဂျက်အတွက် သင်္ဘောဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသလား။
A: ဟုတ်တယ်၊ ပင်လယ်၊ လေကြောင်းနဲ့ မီးရထားနဲ့ မင်းရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို အခြေခံတယ်။ အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို လွယ်ကူစွာရရှိရန် ကူညီပေးမည့် တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး ဆိုက်တွင် ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရရှိရန် စောင့်ဆိုင်းရန်သာ လိုအပ်ပါသည်။
1. ပရီမီယံပစ္စည်းများဖြင့် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး။2. စက်ရုံတိုက်ရိုက်စျေးနှုန်း၊ 65% အထိချွေတာပါ။3. Professional Designers 12 ယောက်။4. One Stop ဖြေရှင်းချက်။5. ယုံကြည်ရသော BV၊SGS၊Rosh၊ISO9001 လက်မှတ်များ။
ယခုအခါ နိုင်ငံပေါင်း 200 သို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တင်ပို့နေပါသည်။
DG ပြပွဲတွင် စိတ်ကြိုက် အဆင့်မြင့် ဇိမ်ခံလက်ဝတ်ရတနာများ ခင်းကျင်းပြသထားသော အရောင်းပြခန်း ထုတ်လုပ်သူ|DG Master of display showcase
DG သည် စိတ်ကြိုက် ဇိမ်ခံ ခေတ်မီ အလှဆင် ဒီဇိုင်းသစ် လက်ဝတ်ရတနာဆိုင် ခင်းကျင်းပြသထားသော ဗီဒိုကို ပြသထားသည်။
DG သည် စိတ်ကြိုက် ဇိမ်ခံသံမဏိ ဖန်သားထည် လက်ဝတ်ရတနာများ ခင်းကျင်းပြသထားသည်။
DG စိတ်ကြိုက်ဇိမ်ခံလက်ဝတ်ရတနာစတိုးဆိုင် ခင်းကျင်းပြသထားသော ဗီရို Stainless Steel Glass လက်ဝတ်ရတနာပြခန်း
သင်စိတ်ဝင်စားပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် 2022 အတွက် အခမဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ပေးပါမည်။
DG Master of Display Showcase သည် စိတ်ကြိုက်စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်သူနှင့် ဖြေရှင်းချက်ပေးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ရန် အခမဲ့ ခံစားပါ။
မိုဘိုင်း- +86 13610079233 / +86 13822140043
Whatsapp- +86 13610079233
တရုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးစင်တာ- 14 လွှာ၊ Zhihui International အဆောက်အအုံ၊ Taiping Town၊ Guangzhou (အထပ်အပြည့်)
တရုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစင်တာ- Dinggui စက်မှုပန်းခြံ၊ Conghua Taiping မြို့၊ Baiyun ခရိုင်၊ Guangzhou